Faallo: Marin Habaabinta Bulshada | JAMHURIYADDA
Home Faallada Tafaftirka Faallo: Marin Habaabinta Bulshada
Faallo: Marin Habaabinta Bulshada
Burburka dowlada dhexe sanadii 1991 kadib, dalka waxaa uu galay jahawareer siyaasadeed iyo mid amni. Waxaa arrinkaas barbar socday dadaalo ay dad Soomaali iyo shisheeye ah ay wadeen si wax looga qabto dhibka jira. Balse dhammaan dadaaladdaas ma wada aheen kuwo ka madhan fulinta dano gaar ah, sida kuwo shisheeye, shaqsi, ama koox!
Dadaalada dalka uu mahadiyey, waxaa ka mid ah hirgelinta adeega xawaaladaha, isgaarsiinta, waxbarashada iyo caafimaadka iwm. Dhammaan maskaxda ka danbeysay fulinta adeegyadaas waxay aheed mid Soomaaliyeed. Waana sababta ay u noqdeen qorsheyaal ujeeddadii laga lahaa la xaqiijiye. Inkastoo marnaanta dowladnimada ay wax u dhintay inay noqdaan kuwo gaara tayo heer caalami ah (universal standard).
Dad badan ayaa qaba in qaar ka mid ah saxaafadda iyo machadyada cilmi-baarista, gaar ahaan kuwa siyaasadda iyo amaanka, uusan dalka mahadin! Waxay shacabka Soomaaliyeed u horseedeen in la dabro, si loogu hayo hubaal la’aanta mustaqbalka.
Khabiirada siyaasadda gobolka qaar ka mid ah ayaa qabaan, in sababta ay tahay machadyadaas oo ay maalgelintoodu ka timidaado dibedda, iyadoo laga leeyahay ujeeddooyin qarsoon. Waxaa la tuhunsan yahay in qaar ka mid ah shaqsiyaadka Soomaalida ee hor booda hay’adahaas yihiin kuwo dhaafsaday danahii dalka iyo dadkoodba, dhuuni iyo mansab aan muunad lahayn.
Afka diblomaasiyada, waxaa loogu yeeraa hay’adahaas shaqsiyaadka horbooda, hogaamiyaasha aan la dooran. Waxay saamayn ku leeyihiin go’aan ka gaarida dalka dhanka taban (negative thinking).
Waxaa intaas dheer, in badan oo ka mid ah machadyadaas waxaa loo abuuray, ilaalinta masaalix hayb, koox, iyo shaqsiyaad. Waxaa sidoo kale, taas barbaryaala in qaar ka mid ah loo adeegsado salaan lagu fuulo masraxa siyaasada dalka.
Waxaa talooyinkooda qoraalka ah iyo wareysiyadaba ay bixiyaan horseedaan qalalaase siyaasadeed iyo mid amni. Waana sida ay u arkeen inay ku gaari karaan danahooda guracan!
Hadabba, marin habaabinta ra’yiga shacabka maxay ka qabtaa sharuucda dalka dowliga ah?
Naqdiyadda ugu weyn ololahii BREXIT, ayaa ah marin habaahinta bulshada. Wasiirkii hore ee arrimaha dibedda Ingriiska – Boris Johnson, waxaa uu wajahayaa eedo la xiriira inuu warbixin been abuur ah (fake news), uu ku ololeeye aftidii ka bixida Midowga Yurub. Taas oo horseeday in shacabka dalkaas u codeeyaan inay ka baxaan Midowga Yurub (The guardian May 29, 2019).
Haddaba, miyaanan la soo gaarin, waqtigii runta loo sheegi lahaa ururadaas ama kooxahaas ku howlan faafinta beenta, iyo borobagaandada loogu adeegayo shisheeyaha duulaanka ku ah dib-u-dhiska dowladnimadda.
Haddii aad rabto in aad soo gudbiso fikrad ama falanqeyn, fadlan ku soo dir emailka jamhuriyadda.wordpress.com – Dhammaan xuquuqda faalladaan waxaa iska leh Wargeyska Jamhuriyadda. Haddiise aad dib u dhaabacayso waa inaad xustaa in aad ka soo minguurisay Wargeyska Jamhuriyadda. Masawirka: Internetka ayaa laga soo amaahsaday.
Previous articleFaallo La Xiriirta Buugga: The Orchard Of Lost Souls
Next articleSoomaaliya: Siyaasad Miisaan Leh!
Nidaam Dabran – Federaalka Soomaaliya Ma Ku Badbaadi Doonaa Dadaalka Cabdi Xaashi?
jamhuriyadda - June 17, 2020 0
Kalfadhigii 7aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed (BFS) oo furmay June 6, 2020 wixii ka dambeyey waxaa dalka soo wajahay dabeylo isbeddel wata...
Ankara oo Uga Digtay Abu Dhabi Inay Joojiso Siyaasadeeda Burburinta iyo Colaad Shididda
jamhuriyadda - May 13, 2020 3
Warbixin qarsoodi ah oo loo soo bandhigay Qaramada Midoobay (QM), ayaa shaaca ka qaadday in qandaraasleyda Ruushka ee Wagner Group ay u...
Faallo: Saxaafad Madaxbannaan Waa lafdhabarka Dimuqraaddiyada
jamhuriyadda - April 8, 2020 0
Twitter, sita sumadda hay’adda NISA, ayaa la soo dhigay Abril 2, 2020 eed dhan ka ah wariye Harun Macruf. Qoraalku wuxuu u...
Taariikh Nololeedka Hassan Ghedi Santur
Dib U Eegis Buug jamhuriyadda - July 8, 2020 0
Qoraaga magaciisa marka la adeegsado higgaadda af-Soomaaliga waa Xasan Geeddi Santuur. Magacan ayaan u adeegsanaynaa taariikh nololeedkiisa iyo falanqayanta bugaagtiisa.
Taariikh Nololeedka Georgi Kapchits
Dib U Eegis Buug jamhuriyadda - December 4, 2019 0
Qoraaga wuxuu dhashay 1939, dhalashadiisa waa Ruush, wuxuuna ku qalin jabiyay Cilmiga Afafka (Linguistics) Jaamacadda Qaranka ee Moskow machadkeeda Daraasadaha Asiya iyo...
Faallo Buugga: HIDING IN PLAIN SIGHT
Dib U Eegis Buug jamhuriyadda - April 24, 2019 0
Buuggani waa midkii 12aad bug sheeko oo uu Nuruddiin qoro (HIDING IN PLAIN SIGHT - N.F. Riverhead Books, NY,2014), waxaana ka dambeeyay:...
Imaaraadka Ma Yahay Saaxiib La Isku Haleen Karo?
Siyaasada jamhuriyadda - July 31, 2019 5
Siyaasada arrimaha dibedda Imaaraadka Carbabta, waxay muddo dheer ku dhisneyd xeelad (strategity) ah saaxiib leh faa'iido. Waxaana arrinkaas u suurto-gelinayey dhaqaalaha ay...
Hab Dawladeedka Federalism-ka
Siyaasada jamhuriyadda - June 12, 2019 0
Habka Federalism-ka, waxaa dunida ku dhaqma dawladdo kala duwan oo ay ka mid yihiin USA, Germany, Switzerland, Russian Federation, United Arab Emirate,...
Maxay Doorashada Jubaland Xiisad Gooni Ah U Leedahay?
Ra'yi jamhuriyadda - May 29, 2019 0
Waxaa qoray maqaalka - Mahad Wayax Jubbaland waxa kusoo food leh doorasho adag, doorashadan waxay leedahay muhiimad gooni ah...
Dib U Eegis Buug19